Mahad Salaad Muxuu ka yiri hadalkii Madaxweynaha DDSI ? – XAMAR POST
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si la mid ah C/kariin Xuseen Guuleed waxa uu ka jawaabay hadalka ka soo baxay Madaxweynaha Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya (DDSI) Cabdi Maxamuud Cumar.
Madaxweynaha DDSI Cabdi Maxamuud oo ka hadlayay arrinta C/kariin Qalbi-dhagax ayaa sheegay in ay jiraan shaqsiyaad horey u saxiisay heshiis ku saabsan Maxaabiis is dhaafsi, hadana dhaliilaya, kuwaasi oo uu sheegay in ay ka mid yihiin Xildhibaan Mahad Salaad iyo C/kariin Xuseen Guuleed.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay qaabka ay ku tageen magaalada Jigjiga inuu ahaa qaab beeleed, kaasi oo uu sheegay heshiiskiisa in uu quseeyay dagaaladii bishii May 2015 ku dhex maray ciidamada Liyuu Police iyo dadka degaanka ee Gobolada Qoraxay iyo Galgadud ee ka kala tirsan maamulada DDSI iyo Galmudug.
Wuxuu sheegay xildhibaan Mahad Salaad heshiiska dhexmaray Galmudug iyo Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya in uusan ku jirin Maxaabiis la isweedaarsanayo iyo eedaysaneyaal la isu soo celinayo.
Ugu dambeyntii Xildhibaan Mahad Salaad ayaa Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka waxa uu ugu baaqay in ay qaataan mas’uuliyada C/kariin (Qalbi-dhagax) oo uu sheegay in ay ku dhiibeen sifo sharci daro ah.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka Xildhibaan Mahad Salaad
HESHIISKA JIGJIGA EE MADAXWEYNAHA DDSI ABDI MOHAMUD OMAR SHEEGAY MUXUU KU SAABSANAA?
Heshiisku waxa uu quseeyay dagaaladii bishii May 2015 ku dhex maray ciidamada Liyuu Police iyo dadka deegaanka ee Gobolada Qoraxay iyo Galgadud ee ka kala tirsan maamulada DDSI iyo Galmudug, wuxuuna dagaalku ka bilowday deegaanka Ismadhaqo ee Gobolka Qoraxay ee DDSI.
Qaabka aan meesha ku tagnay wuxuu ahaa qaab beeleed, sababtoo ah Aniga, Ugaaska, Gudoomiyaha Gobolka iyo Odoyaasha Dhaqanka dhamaanteen dad meel kasoo wada jeeda ayaan ahayn, dhibaatada meesha ka dhacdayna waxay ahayd mid si gaar ah noo taabaneysay.
Sababta anigu aan u tagayna waxay ahayd deegaanada Galmudug oo markaasi aan lahayn dowlad goboleed iyo aniga oo Xildhibaan u ahaa dadka meesha dhibku ku gaaray.
Sidoo kale waxaa isweydiin mudan heshiiska xagee uga jirtaa maxaabiis la isweedaarsanayo iyo eedaysaneyaal la isu soo celinayo. Abdikariim Qalbi Dhagax iyo kooxdiisa hadii heshiiskaani quseeyay maxaa loogu dabiqi waayay sadex dii sano ee la soo dhaafay reer Mogadishu ayuu ahaa Abdikariim?!
Waa wax laga xumaado arin ku koobneed dagaal ka dhacay labo Gobol xalinteeda in loo isticmaalo ajandeyaal siyaasadeed iyo kuwa amni oo aan meeshaba ku jirin xiligii heshiiska la kala saxiixanayay.
Sidoo kale waxaa wax laga anfariiro ah madaxdeenii aan dooranay meeshii ay umadda inta horyimaadaan la hadli lahaayeen, qancina lahaayeen in dowlado iyo maamulo kale inta baryaan dhabarkooda isku soo aadiyaan ay yiraahdaan na difaaca. Taasoo aan aaminsanahay inay daliil cad u tahay in dalkaan musiibo qaran ku dhacday oo hogaankii ka halaabay!
Sida ku cad Qodobka 36aad, Faqradiisa 1aad iyo 2aad ee Dastuurka KMG arinta isu-celinta eedaysaneyaasha iyo danbiileyaasha waxay ku imaan kartaa oo kaliya heshiis Dowlada Federaalka Soomaaliya dhinac ka tahay iyo heshiis caalami ah oo ku waajibinaya dowlada Soomaaliya isu-celinta eedaysanaha iyo danbiilaha. Sharciga lagu maamaulayo isucelinta dembiileyaasha waxaa soo saaraya Barlamaanka Federaalka. Lamana sameyn sharcigaas ilaa hada!
Sida ku cad Qodobka 37aad, Faqradiisa 1aad ee Dastuurka KMG iska dhaaf muwaadin Soomaali ahe xitaa qofka ajnabiga ah ee qaxootinimo kusoo gala Jamhuuriyada Soomaaliya dib looguma celin karo dalkii uu ka yimid hadii ay jirto cabsi muuqata inuu la kulmayo ciqaab.
Ugu danbeyntii waxaan ugu baaqayaa Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha in ay qaataan mas’uuliyada muwaadinkaas ay ku dhiibeen sifo sharci daro ah oo aan waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala iyo qawaaniinta caalamiga ah.
WARBIXIN: Sidee loo shaqaaleysiinayaa 1000-ka dhalinyaro ee G/Banaadir ?